Nnukwu data na-ere ahịa n'ime Ezigbo Oge | Martech Zone
Ndị ahịa na-achọ mgbe nile ịbịakwute ndị ahịa ha n'oge kwesịrị ekwesị - na ịme ya tupu ndị asọmpi ha. Na ọbịbịa nke Intanet na ezigbo oge nchịkọta, oge iji dị ndị ahịa gị mkpa. Nnukwu data na - eme ahia ugbu a ọsịsọ, na - anabata ozi ma na - arụ ọrụ karịa ka ọ dịbu. Otutu ihe omuma na ike igwe site na igwe ojii, nke na-adiwanyewanye ma di onu ahia, putara na obuna ndi obere ulo oru nwere ike imeghachi ahia na oge, mara ihe ndi ahia ha choro na ike ha (ikekwe tupu ha emee), ma buo amụma na na-atụ anya mgbanwe.
Gịnị bụ Real-Oge Marketing?
Marketingzụ ahịa n’oge na-ezo aka n’inweta ndị ahịa ozugbo n’oge ha chọrọ ma ọ bụ zaghachi ozi gị. Ọ pụtakwara na ị nwere ike ịgwa ndị ahịa gị okwu n’ọnọdụ nke oge a. A na-eme atụmatụ azụmaahịa ọdịnala dabere na omume kacha mma, oge ma ọ bụ na usoro nke ika ahụ. A na-eme atụmatụ ịzụ ahịa oge na-adabere na omume, mmadụ na ọnọdụ nke onye nnabata ahụ. Ọ na-ahaziri nakwa.
N'ime oge Super Bowl nke afọ 2013, mgbe ike gwụrụ, Oreo kpaliri mgbasa ozi na nkeji nkeji nke kwuru "I ka nwere ike ịnọ n'ọchịchịrị."
Nke ahụ bụ naanị otu ihe atụ na-atọ ụtọ. Karịa ike, Target nwere ike iji omume ịzụ ahịa chọpụta mgbanwe ndụ ma nye ndị ahịa mbelata ngwaahịa dị mkpa, ọbụlagodi ịtụ ụjọ (lee edemede na Target mara mgbe ndi ahia di ime). Ọzọkwa, ndị na-ere ntanetị n'ịntanetị, dị ka Amazon, amụtala ịtụ anya mgbe ịnwere ike ịdalata na ngwaahịa ndị na-eri ngwaahịa nke na-ebute onyinye ncheta.
Ruo obere ogo, ụlọ ọrụ ndị na-ekpo ọkụ na ndị jụrụ oyi nwere ike iji akụkọ ihe mere eme n'oge gara aga na data ihu igwe ịkọ amụma nwere ike ijikwa olu dị elu karịa ụlọ ọrụ ndị na-eche ka ekwentị kpọọ, n'ihi na ha na-akwadebe ihe onwunwe tupu oge eruo. Lọ oriri na ọrantsụtaụ nwere ike iji ịzụrụ usoro ịkọ ụdị nri ndị ahịa na-ahọrọ n'oge dị iche iche n'afọ. Enweghị azụmahịa nke enweghị ike irite uru site na iji data ịkọ amụma, ịtụ anya, na ịzụ ndị ahịa ha n'oge.
Azụmaahịa abụwo ihe ọdịnala sara mbara na echiche efu. Enwere ọtụtụ mmadụ n'ụwa, ụlọ ọrụ anaghị eche na ha nwere ike iru ndị mmadụ n'otu n'otu. Maka ọtụtụ akụkụ, ndị mmadụ aghọtala ma tinye ụdị echiche a "nnukwu ahịa". Agbanyeghị, ka nnukwu data na-eto eto, ndị mmadụ na-amalite ịtụ anya na a ga-emeso ha dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu.
Ọ nwere ike ịdị ka ọ bụ enweghị nghọta, “Kedu ka data ỌZỌ nwere ike isi mee ka ndị mmadụ pụọ iche?” N'ezie, nke ahụ bụ ihe na-eme Nnukwu data dị ike. Nddị, omume, mmasị, na omume onye ọ bụla dị mfe iji chọpụta ma ghọta mgbe ịnwere data ị ga-esite na ya. Na obere data, anyị niile na-edozi maka nkezi. Site na data ndị ọzọ, anyị nwere ike ịmalite ịkwado ihe dị iche iche nke ndị ahịa anyị.
Na asọmpi ahịa, ulo oru nke nwere ike iso ndị ahịa na-ahaziri iche na otu ga-emeri ndị na-enweghị ike ịhụ karịa "nkezi ahịa." Anyị na-agba ọsọ na otu.
AKW eKWỌ AKW “KWỌ "Marketingzụ ahịa na Ọsọ nke Azụmaahịa"
Iji mụtakwuo banyere Big Data na-agbanwe ahịa, ma hụ nyocha ọmụmụ banyere otu ndị na-ere ahịa, ndị na-emepụta ihe, na ụlọ ọrụ ahụike na-eji data ahụ iji mee ka ahịa ha dị ike n'oge, gaa na Perscio na budata akwukwo ozi anyi n’efu.
Budata Azụmaahịa na Ọsọ nke Azụmaahịa
Tags: nnukwu datannukwu ahia ahiafree akwụkwọ edemedeire ahia n’azụ ahịaOreoogbaraozugboezigbo oge nnukwu dataezigbo oge ahịaTwitterAkwụkwọ edemede
Chris bụ onye isi ahịa ahịa ahịa Perscio, onye ọchụnta ego na-elekwasị anya n'ịmepụta ohere Big Data maka ndị ahịa ha, ebe ọ mepụtara akara na izipu ozi site na ala, site na logo ruo olulu ahịa.